တက္ကသိုလ်သင်တန်းများကြားတွင် အတည်ပြုချက်များ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 21/06/2022 22:47 | အဆင့်မြှင့်တင် 21/06/2022 22:48 | လေ့ကျင့်ရေး
တက္ကသိုလ်ဒီဂရီများကြား တရားဝင်အောင်ချက်များအား မည်သို့စီမံမည်နည်း။ ဘာသာရပ်တစ်ခုအား အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပညာရေးဘဝ၏ မတူညီသောအခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်တစ်ခုအား ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်တွင် တောင်းခံလေ့ရှိပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကျောင်းသားသည် ၎င်း၏ယခင်လေ့ကျင့်မှုကို ပြီးမြောက်ရန် အဆင့်အသစ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် သူသည် ဒုတိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို လေ့လာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
1 အချို့သော ဘာသာရပ်များကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည့် အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။
2 လျှောက်လွှာတင်ပြီး နောက်ဆုံးအဖြေကို စောင့်ပါ။
အချို့သော ဘာသာရပ်များကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည့် အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။
ထိုသို့ဆိုလျှင် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ညီမျှနိုင်သော အလားတူ အကြောင်းအရာများ ရှိပါက၊ အချို့သောဘာသာရပ်များကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခြေရှိပါသည်။. ဒုတိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို လေ့လာခြင်းသည် ဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်သင့်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတွင် ကတိကဝတ်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်မှုတို့သည် အလွန်တောင်းဆိုမှု (နှင့် ရေရှည်အပေါ် အာရုံစိုက်ပါ)။ သို့သော် အလုပ်ရှာဖွေရန် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့် ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ အချို့သောဘာသာရပ်များကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သောအခါတွင် လေ့လာမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျောင်းသားသည် ၎င်းတို့ ယခင်လေ့လာခဲ့သော ဘာသာရပ်များကို ပြန်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ (စာမေးပွဲများ အောင်မြင်သည်)။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ခရီးစဉ်အသစ်အပြီးသတ်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလကို လျှော့ချထားကြောင်း သတိပြုပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့် ဒုတိယဘွဲ့ကို ဆက်တက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါ၊ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့် ကိုက်ညီမည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် သာမာန်ဖြစ်သည်။ အစီအစဥ်နှစ်ခုကြားတွင် တူညီမှုမရှိပါက၊ အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအခြေအနေများကို ဖန်တီးမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိရသင့်သည်။
အခြားကိစ္စများတွင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို မတူညီသောအကြောင်းအရာဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ ကျောင်းသားသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် တက္ကသိုလ်ကို စတင်သင်ကြားပြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် ပြီးဆုံးသောအခါတွင် ယင်းသည် ဖြစ်ပျက်သွားပါသည်။ ဒီအမှု ဖြစ်ပေါ်လာရင်၊ ပရိုဂရမ်တွင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအား တရားဝင်ပြုလုပ်ပြီးနောက် အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။. အပြောင်းအလဲအတွက် အကြောင်းပြချက်သည် မတူညီသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုတွင် စာရင်းသွင်းလိုသောဆန္ဒနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပထမနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံသည် ဤဘွဲ့ကို ရယူလိုသော စိတ်ကူးကို ထပ်မံအတည်ပြုနိုင်သည်။
သို့သော် မျှော်လင့်ချက်များကို ချိုးဖောက်နိုင်ခြေလည်း ရှိပါသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် ကျောင်းသားသည် ထိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနာဂတ်တွင် သူ၏ပျော်ရွှင်မှုကို မမြင်နိုင်ပေ။ ဒါတောင်မှ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးက ရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်၊ (တချို့လူတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုကြာကြာရွှေ့ထားနိုင်လွန်းလို့)။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကို တစ်ခါတလေ သတိရပါ။ အချို့သော ဘုံဘာသာရပ်များကို အတည်ပြုရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါသည်။.
လျှောက်လွှာတင်ပြီး နောက်ဆုံးအဖြေကို စောင့်ပါ။
Validation သည် တရားဝင်တရားဝင် တရားဝင်မှုရှိသော ပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည်။. ကျောင်းသားသည် သူသင်ယူခဲ့သော ဘာသာရပ်များ၏ ပညာရေးရည်မှန်းချက်များကို ကျော်လွန်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြသနေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပြောကြားခဲ့သော အချက်အလက်များသည် သင်၏ပညာရေးမှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်တစ်ခုစီတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများစွာ ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိသည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိပါက သင်လေ့လာနေတဲ့ တက္ကသိုလ် ဒါမှမဟုတ် အဆင့်သစ်တစ်ခုစတင်မယ့်နေရာကို ဆက်သွယ်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
အတည်ပြုချက်တောင်းခံရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အဖြေကို စောင့်ရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ မည်သည့်ဒေတာကိုမျှမပေးပါနှင့်။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ အတိတ်တွင်အောင်မြင်ခဲ့သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာပန်းတိုင်အချို့သည် အနာဂတ်တွင် သင့်အတွက်တံခါးဖွင့်ထားသည်။ သင်ယခင်က အောင်မြင်ပြီးကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခံရသော ဘာသာရပ်တစ်ခု ထပ်မံသင်ယူရန် မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဤအရာသည် ဖြစ်ပျက်နေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အချို့သော အတန်းများကို ထပ်မံတက်ရောက်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ၊ သို့မဟုတ် အချို့သော စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင်လေ့လာနေသည့် ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » လေ့ကျင့်ရေး » တက္ကသိုလ်သင်တန်းများအကြား အတည်ပြုချက်များ